July | 2010 | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
၀ိပဿနာတရားအားထုတ်ရန် အခြေခံအချက်အလက်များ အပိုင်း(၃၇)
Posted on July 30, 2010 by chitnge
၀ိပဿနာတရားအားထုတ်ရန် အခြေခံအချက်အလက်များ အပိုင်း(၃၇) အပွင့်ဓာတ်တစ်ခုဖွင့်ခြင်း အဆက် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်ကနေ ကမ္ဘာအရပ်အရပ်ဆီသို့ ကမ္ဘာရွာဆိုသလို အင်တာနက်ကနေ လွှင့်တာဟာ စကြ၀ဠာကြီး တစ်ခုလုံးက တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု ဆက်စပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့သဘောကို သက်သေခံခဲ့တာပါ။ ဒီအကြောင်းကို ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကြိုတင်ပြီးတော့ သိပြီးသား၊ နားလည်ပြီးသား … သို့သော် ဗုဒ္ဓဘာသာကတော့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာနဲ့ ဖမ်းတာကိုး၊ ဒီအခါကျတော့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ လက်နက်က လူတိုင်းမှာမရှိဘူး၊ အိမ်တိုင်းမှာ မရှိတော့ လူတိုင်း မဖမ်းနိုင်ဘူး၊ အိမ်တိုင်းမှာ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ကမ္ဘာ, လောကုတ္တရာ	| Leaveacomment
၀ိပဿနာတရားအားထုတ်ရန် အခြေခံအချက်အလက်များ အပိုင်း(၃၆)
၀ိပဿနာတရားအားထုတ်ရန် အခြေခံအချက်အလက်များ – Update အပိုင်း(၃၆) အပွင့်ဓာတ်တစ်ခုဖွင့်ခြင်း ယောဂီများ တရာားကျင့်နေပြီ — ဒီတော့ အပွင့်ဓာတ်တစ်ခုကို ပြောလိုတယ်။ အဲဒီ အပွင့်ဓာတ်က ဘာလည်းဆိုတော့ ယောဂီများ အိမ်မက်ကို ဂရုစိုက်ပါ။ ယောဂီများ တရားရှုတယ်ဆိုတာ လောဘ ဒေါသ မောဟ ပါးသွားအောင် ရှုတဲ့သဘောပါပဲ။ တိုက်ဆိုက်လို့ ပါးသွားပြီး အိမ်မက်မက်တဲ့အခါမှာ – အိမ်မက်ဟာ ကိုယ့်အတွက် အဓိပ္ပာယ်ရှိတာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ယောဂီများ အိမ်မက်ကို ဂရုစိုက်ပါတော့ . . . … Continue reading →
ယောဂီများတရားရဖို့လိုအပ်ချက်များ(၇) “တစ်စုံတစ်ရာသည် အမှန်တကယ် တည်ရှိရိုးမှန်လျှင် စိတ်ဝင်စားမယ် .. ..” သိပ္ပံပညာ၌ – “If something is existing out there actually and really it is to be interested. .. ..” ဟူသော အယူအဆ ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်၊ သူတို့က “အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတယ်၊ အမှန်သာရှိလျှင် စိတ်ဝင်စားမယ်” ဒီလိုပြောပါတယ်။ အခု ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ နိဗ္ဗာန်က အမှန်ရှိနေတာ။ ဒါကျတော့ ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုရင် … Continue reading →
ယောဂီများတရားရဖို့လိုအပ်ချက်များ(၆) သုံးလွန်းတင်မှကြိုး မြတ်စွာဘုရားရဲ့ သာသနာတော်ဟာ “သုံးလွန်းတင်မှကြိုး”ဆိုတဲ့ စကားလိုပါပဲ။ ပရိယတ္တိ၊ ပဋိပတ္တိ၊ ပရိဝေဒ သုံးမျိုးရှိ တာပါ။ မြန်မာလိုပြောရရင် သဘောတရားရေးရာရယ်၊ လက်တွေ့ရယ်၊ လက်တွေ့ကျင့်လို့ရတဲ့ အကျိုးအမြတ်ရယ် ပေါ့။ ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သဘောတရားရေးရာ သက်သက်ပါပဲ အကျင့် မပါပါဘူး၊ အကျင့်ကပေးတဲ့ အသိပညာ မထွက် ပါဘူးလို့ ဒီလို ယူဆခံရတာဟာ လွန်စွာဝမ်းနည်းစရာ ကောင်းပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ နဂိုကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ သုံးလွန်းတင်မှကြိုးလိုပဲ သဘောတရားရေးရာလည်း ပါတယ်၊ လက်တွေ့လည်း ပါတယ်၊ အကျိုးအမြတ် … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged Buddhism, Myanmar Posts, ကွန်မြူနစ်, သာသနာ	| Leaveacomment
၀ိပဿနာတရားအားထုတ်ရန် အခြေခံအချက်အလက်များ အပိုင်း(၃၀)
၀ိပဿနာတရားအားထုတ်ရန် အခြေခံအချက်အလက်များ အပိုင်း(၃၀) သာသနာက စောင့်ရှောက်တာကို ယုံကြည်ထိုက်ပါတယ် . . . ယောဂီများ တရားကျင့်နေတာ သာသနာ့အရိပ်ကို ခိုတာပါပဲ။ သာသနာ့အရိပ်ကို ခိုခြင်းဟာ ကောင်းသော ဆောင်ရွက်ခြင်းပါပဲ။ သာသနာ့အရိပ်ဟာ ခိုကိုးသင့်ပါတယ်၊ သာသနာတော်မြတ်ကြီးက လုံးဝစောင့်ရှောက်တယ်၊ ရုပ်နာမ်တွေက ဒုက္ခများလို့သာ သာသနာတော်က စောင့်ရှောက်ပေမယ့် စောင့်ရှောက်တာကို စောင့်ရှောက်မှန်း မသိတဲ့အခါ မသိဘူး၊ သို့သော်လည်း တကယ် စောင့်ရှောက် ပါတယ်။ စိတ်ချပါ – ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် အစောင့်ရှောက်ခံရတာတွေ နောက်ပိုင်းမှ အတွေ့အကြုံတွေ ပြောပြပါ့မယ်၊ … Continue reading →
Posted in Buddhism, Frontpage	| Tagged ၀ိပဿနာ, Buddhism, Myanmar Posts, ဆရာမြတ်ကြီး, သာသနာ	| Leaveacomment
ယောဂီများတရားရဖို့လိုအပ်ချက်များ(၄) ယောဂီများ သစ္စာတရားရှာမှီးတဲ့အခါ ပန်းခင်းတဲ့လမ်းကြီး လျှောက်ရမယ်လို့ ကျွန်တော့်ဆရာကလည်း မမိန့်ဖူးပါဘူး။ သစ္စာတရားအတွက် လျှောက်တာ လျှောက်ရတာပဲ ရဲရဲရင့်ရင့် ခိုင်ခိုင်လုံလုံ သတ္တိရှိရှိ ပြတ်ပြတ်သားသား လျှောက်ရတာလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် သစ္စာတရား လျှောက်လှမ်းတဲ့ နေရာမှာ ပန်းခင်းတဲ့လမ်းချည်းလို့ သဘောမထားစေချင်ဘူး။ ယောဂီများကလည်း ဒီသဘော ထားမှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လူ့ဘ၀ဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ – သမုဒ္ဒရာထဲမှာ သင်္ဘောသွားတာ လှိုင်းတစ်လုံးပြီး တစ်လုံးတွေ့သလိုပါပဲ။ အခက်အခဲနဲ့ ကျော်လွှားစရာတွေက တစ်ခုပြီး တစ်ခုတော့ တွေ့ရမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ထူးခြားတာက … Continue reading →